Xiisadda Mareykanka iyo Iiraan oo gaartay meeshii ugu sareysay – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Abdihakim Sharif Ali / June 26, 2019 June 30, 2019
Muqdisho(SONNA) Dowladda Dalka Iiraan ayaa si cara leh ug ajawaabtay go’aankii dowladda Mareykanka ee ku aadanaa xayiraada hogaamiyaasha Iiraan,iyo saraakiil sar sare kuwaasi oo laga xayiray in wax galangal ah ay ku yeeshaan suuqa dhaqaalaha Caalamka.
Waxaana talaabadaasi qaaday madaxweyne Donalda Trump,si looga jawaabo soo riditaankii diyaaradii aan duuliyaha layan ee Mareykanka ee lagu soo riday hawada sare ee gacanka Hormuuz ee Khaliijka,balse Iiraan ay sheegtay in lagu soo xadgudbay hawadeeda.
Abbas Mousavi oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda Arrimaha ee dalka Iiraan ayaa sheegay in talaabada Mareykanka uu ku beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Iiraan Aayatulah Cali Khameni iyo saraakiil sare oo ka tirsan dowladu ay ka dhigantahay in uu soo xirmay albaabkii wada hadalada dhinaca Diplomaasiyadda ee Mareykanka iyo Iiraan.
Geesta kale John Bolton oo ah lataliyaha dhanka amniga qaranka ee madaxweyne Trump ayaa ugu baaqay Iiraan in ay ogolaatay wadahadalada si loo dhameeyo khilaafaadka diplomaasiyadeed.
Warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in Mareykanku uu qorsheynayo in wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Mohammad Javad Zarif liiska xayiraada uu ku rado.
Hasan Ruuxaani oo ah hoggaamiyaha dalka Iiraan oo ka hadlay talaabadaasin ayaa xusay in ficil xun ay tahay in la beegsado Aaayahtulah iyo saraakiisha sare ee Iiraan,wuxuuna xusay in hoggaamiyahaasi oo 80 jirka ah uusan doonayn in uu u safro dalka Mareykanka.
Madaxweyne Ruuxaan oo telfoonka kula hadlay dhigiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa u sheegay in hadii mareykanka uu ku xadgudbo sohdimaha Iiraan, ay ciidamada difaaca Iiraan ay qabaan amar ah in ay ka hortagaan Qatar kasta.
Mowjidaha siyaasadeed ee Bariga Dhexe ayaa cirka isku sii shareeray wixii ka dambeeyey markii Mareykanka uu ka baxay heshiiskii Nuclearka Iiran iyo quwadaha caalamka.